Ramamimampionona Gérard: “Ny olona no olana eto amin’ny firenena” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard: “Ny olona no olana eto amin’ny firenena”
Mampikaikaika ny maro ny tsy fandriampahalemana amin’izao fotoana izao. Inona ny vahaolana? Maneho ny fijeriny ny filoha lefitry ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CFM), avy amin’ny faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard: “Ny olona no olana amin’io. Tsy maintsy olona no manao tsy fandriampahalemana.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ahoana ny fijerinao ny amin’ny hoe fanorenana ifotony lasa resabe talohaloha teo?
Ramamimampionona Gérard (-): Lasa resaka ideolojia politika ny hoe fanorenana ifotony tato ho ato, lasa ifandroritana. Ny tena tokony ho izy: izay mahatsiaro tena ho Malagasy, manana andraikitra amin’ny fanorenana ny firenena. Samy mpitondra ange eto amin’ny firenena… Hafa aloha ny hoe olom-boafidy. Tsy izay ilay samy mpitondra fa eo ny hoe mpitondra tena, mpitondra fianakaviana, mpitondra amin’ny sehatra misy azy… Misy zavatra entina avokoa isika tsirairay avy. Ahoana, ohatra, ny hoe mpitondra tena? Olona iray ange matetika no mety hiavian’ny fanakorontanana. Iza izany?
Tsy ny fizarana seza no fanorenana ifotony. Mety misy rafitra fa tsy izay ihany. Mialoha izany, eo ny olona. Ny olona no olana eto amin’ny firenena fa tsy maintsy misy amboarina koa ny rafitra. Ny hoe fanorenana ifotony toy ny hoe fandravana sy famafana ny eo, ary fampidirana zavatra hafa. Lasa miverimberina amin’izay isika. Tsy izany ny fanorenana ifotony fa ahoana, ohatra, ny amin’ny fihavanana amintsika izao?
Mandeha, ohatra, izao ny doro tanety, ny herisetra… ? Ahoana isika ny amin’izany fa tsy mpanaja ny aina angaha ny Malagasy? Izany ny fanorenana ifotony: ny fanajana ny aina, ny fanorenam-panahy, ny fifanampiana, ny fifanajana… Very ange izany soatoavina rehetra izany, mila aorina. Manahirana raha fakana toerana ny hoe fanorenana ifotony.
* Tenenina ny amin’izay fanorenana ny soatoavina izay, ahoana ny amin’ny hasin’ny fahefam-panjakana iadian’ny governemanta mafy ny famerenana azy?
– Raha ny tena izy, tokony tsy hitanila ary manana ny hasiny sy ny heriny ny fahefam-panjakana, tokony hohajaina sy hatahorana. Satria mandamina sy manatsara ny fiarahamonina, mametraka ny soa iombonana… Izay ilay hoe entina manatsara sy mampandroso ny fahefam-panjakana. Mila hajaina sy ekena izany.
Ny olana efa elabe: lasa tsy mandeha amin’izay fanatsarana sy fampandrosoana ho amin’ny soa iombonana ny fiarahamonina izay ny fahefam-panjakana fa lasa miasa ho azy samy irery. Hany ka lasa fifanaratsiana, tsy tian’ny olona… Tokony hanaiky ny fahefam-panjakana ny olon-drehetra satria manatsara ny fiainany.
* Ahoana ny amin’ny tsy fandriampahalemana mampikaikaika ny maro amin’izao fotoana izao?
– Ny olona no olana amin’io… Tsy maintsy olona no manao tsy fandriampahalemana: olona mikarama sy manakarama, ary olona no iharany. Efa elabe, nisy ny hoe manakorontana rehefa tonga ny fifidianana. Mbola hisy an’izany ve amin’izao? Lasa ifandovana ve ny toy izany? Lasa mihorohoro ny olona, ary ao anatin’izany: tsy misy zava-banona, hifidy na tsia?
* Tsy amin’ny fifidianana ihany ny tsy fandriampahalemana fa mandavantaona amin’izao…
– Tsy miaro na iza na iza aho… Anisan’ny fomba iray entina tsy ahazoan’ny fitondrana iray, hatramin’izay fa tsy vao izao, miasa tsara ny fametrahana tsy fandriampahalemana ao anatin’ny lamina apetraka. Mametraka lamina, ohatra, ny mpitondra, fahamarinan-toerana ary filaminana sy fitoniana. Raha milamina tsara izy mametraka an’izay, mety mahatanteraka zavatra ary mety ho tiam-bahoaka ka tsy foiny intsony. Miala tsiny aho, tsy hoe iza na iza ny laizako amin’izay… Hita taratra be izay toe-tsaina izay hoe aleo korontanina mba tsy hisian’izay fitoniana ahazoana manao zavatra izay.
* Sao mba ny lamina apetraky ny fitondrana no miteraka korontana toy ny fidiran’ny vahiny amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, ohatra?
– Tsy manda izany aho. Olombelona koa ny mpitondra, na iza na iza teo. Izay no mahamarina hatrany hoe: ny olona no olana, na eo amin’ny fitantanana na ny ety ivelany manakorontana ny mpitantana.
* Inona ny atao amin’izany?
– Ny fahatongavan-tsaina amin’ny fanabeazana… Tsy fanabeazana ho olom-pirenena hoe ny zaza ihany no mila beazina fa atomboka eo amin’ny tsirairay. Fanabeazana olom-pirenena izany. Hiandry ny zaza hatrany izany isika amin’izay fanabeazana izay? Inona no ho ohatra hotahafin’ireny? Raha rava hatramin’ny firenentsika, inona intsony ny ho an’ireny zaza ireny. Miteny hatrany ny olona hoe fanabeazana ho olom-pirenena, toa te hiteny hoe: ny zazakely kitihina fa aza ny fomba ratsy fanaon’ny tena? Beazina ny zaza fa tsy maintsy efa miaina izany koa ny tena mba ho ohatra ho azy ireo sy hamela zavatra ho azy ireo…